Stye ezinganeni: yini okufanele uyenze?
Stye ezinganeni - inkinga lalivamile ezibhekene abazali abaningi. Yiqiniso, iso ukuvuvukala futhi ithumba kungase Ungaphazamisi, eziningi kangaka abazibuza Kanti ziyini ngempela lesi sifo, yiziphi izimbangela zayo kanye zokwelapha.
Uyini stye ezinganeni?
Ibhali yisishiso indlala sebaceous, elise ezijulile ekhulwini. Ngokuvamile le ndlala Athambisa ukhophe, ngaleyo ndlela ukuvikela ke kusukela izici eziyingozi zangaphandle. Kodwa nge yisishiso ahlahlele outflow elakhiwe indlala amafutha. Ngaphezu kwalokho, kukhona ubuhlobo mutual, njengoba ekuqongeleleni fat ngaphakathi indlala kuvusa ukuthuthukiswa ukuvuvukala.
Stye ezinganeni nezimbangela zayo
Njengoba sekushiwo, ibhali yisishiso nezindlala sebaceous. Kodwa yini eyabangela le ukuvuvukala? Empeleni, lesi sifo eba lapho ingaphakathi le ndlala iba elinegciwane - ezimweni eziningi kuba Staphylococcus aureus. Nokho, ingozi aqhelelene futhi ezengeziwe izici:
It is wafakazela ukuthi ibhali kaningi kutholakala izingane abangafuni ukugcina imithetho kwenhlanzeko. Ngokwesibonelo, ingane ingase uwuhlikihle emehlweni ngezandla ezingcolile noma ithawula ukusula ubuso bakhe endala.
Kwezinye izimo, ukuvuvukala kuwumphumela hypothermia.
amaqembu Ubungozi zihlanganisa izingane egqoke contact lens.
Kuthatha ndawo ufuzo.
Stye ezinganeni kungenzeka ngenxa izivikeli mzimba zibe buthaka.
Ngaphezu kwalokho, ukuba imbangela isifo kungafaka iziyaluyalu hormone.
Izimpawu sebhali ngesinye iso
Njengomthetho, ibhali ingane ivela ngokuzumayo, phakathi jikelele nenhlalakahle. Kulokhu, isikhumba phezu abathintekayo indlala sebaceous siyakhukhumala kakhulu futhi reddens. Ngezinye izikhathi ukuvuvukala kungaba namandla kangangokuba lungakwazi kuvimbela yobudala ngokuvamile evulekile. Ezimweni eziningi, izingane ezikhala ngezinhlungu umuzwa esivuthayo ubuhlungu. Mayelana 3-4 amahora phezu kwendunduma yenhlabathi eyakheke ungabona endaweni ekuqongeleleni ubomvu ukuthi ifana ezincane ezimhlophe noma aphuzi ndawo. Kukulo muzi lapho emva kwesikhashana kukhona ikhefu - ubomvu ephuma nge izingcezu izicubu efile futhi igazi. Ngezinye izikhathi lesi sifo kuhambisana imfiva, ubuthakathaka jikelele. Abazali abaningi bazibuza ukuthi kwenzeka kanjani izinsuku eziningi stye zinyamalale. Ngo iningi amacala lesi sifo uya emva 7 - 10 izinsuku.
Stye ezinganeni: indlela yokuphatha?
Ingane ezigulayo, kufanele ngokushesha thatha ukuba kudokotela wezifo zamehlo. Ngisho ngaphansi kwaziphi izimo umuntu okufanele azame ngawakhamela out ubomvu. Ngaphezu kwalokho, it is hhayi Kunconywa ukuba nomusa kuze ibhali kuze udokotela zizodingida ingane hhayi ukuxilongwa esichazayo. Iqiniso lokuthi mayelana izimpawu ezifanayo kungaba ephelezelwa ezinye izifo, ngakho onguchwepheshe ukuhlolwa uyisidingo. Njengoba ukwelashwa, izingane ezimweni eziningi, linqume iso amaconsi, kanye ekhethekile wamafutha (tetracycline, sintomitsinovoy) equkethe imithi elwa namagciwane. Njengoba amakhambi ekhaya ukuthi ungakwazi ugeze phansi yokuphisa itiye amehlo noma gcoba juice Aloe.
Vitreous nakho konke mayelana nakho
Fundus esweni - esibukweni izifo eziyingozi
Izimpawu kanye nokwelashwa conjunctivitis e ingane
Sochi - ukalwe amahhotela: yokuhlala kanye nezinsizakalo
Iphupho zonke umzingeli - IZH 54
Ama-roller izingane: inkinga oluthandwa
Incazelo isikhungo ukuzilibazisa "Koster" (Penza)
Yini okufanele uyenze uma lekati kungaqali Kaka
Kweminyaka ethile beshadile 20: indlela sigubha iminyaka we zobumba?
Indlela ubisi lembuzi, ukuze unike eziningi ubisi